Kubata - Shanghai Miandi Metal Group Co., Ltd.
Ultra Flatness Aluminium Plate
Sezvo zana ramakumi maviri ramakore rakafambira mberi, aluminium yakava simbi yakakosha mundege. Iyo airframe yendege ndiyo yave iri yekunyanya kunyorera kunyorera kwealuminium alloys. Nhasi, senge maindasitiri mazhinji, aerospace inoshandisa zvakanyanya aruminiyamu kugadzira.
Nei uchisarudza Aluminium Alloy muAerospace Indasitiri:
Kurema Kurema - Iko kushandiswa kwealuminium alloys kunodzora huremu hwendege zvakanyanya. Iine huremu ingangoita chetatu chakareruka kupfuura simbi, inobvumira ndege kuti itakure huremu hwakawanda, kana kuwedzera mafuta.
Yakakwirira Simba reAluminium rinoibvumira kutsiva simbi dzinorema pasina kurasikirwa kwesimba kwakabatana nezvimwe simbi, uku ichizobatsirwa nehuremu hwayo hwakareruka. Pamusoro pezvo, zvivakwa zvinotakura mutoro zvinogona kutora mukana wesimba realuminium kuti kugadzira kugadzirwa kwendege kuve kwakavimbika uye kunodhura.
Kuramba kweCorrosion - Kune imwe ndege uye vafambi vayo, ngura inogona kuva nenjodzi yakanyanya. Aluminium inopesana zvakanyanya neora uye makemikari nharaunda, ichiita kuti inyanye kukosha kune aircrafts inoshanda munzvimbo dzinokanganisa maritime.
Kune akatiwandei emhando dzakasiyana dzealuminium, asi mamwe akafanirwa neindasitiri yemuchadenga kupfuura vamwe. Mienzaniso yealuminium yakadaro inosanganisira:
2024- Iyo yekutanga alloying element muna 2024 aluminium imhangura. 2024 aluminium inogona kushandiswa panodiwa simba repamusoro pakurema. Kunge 6061 alloy, 2024 inoshandiswa mumapapiro uye fuselage zvimiro nekuda kwekukakavadzana kwavanowana panguva yekushanda.
5052- Simba repamusoro soro remakirasi asingarapike, 5052 aluminium inopa mukana wakaringana uye inogona kudhonzwa kana kuumbwa kuita zvakasiyana. Pamusoro pezvo, inopa kurwisa kwakanyanyisa kuora kwemvura yemunyu munzvimbo dzegungwa.
6061- Iyi alloy ine yakanaka michina zvivakwa uye inosungirirwa nyore. Iyo yakajairika chiwanikwa chekushandisa zvakanyanya uye, mune aerospace kunyorera, inoshandiswa kune mapapiro uye fuselage zvivakwa. Inonyanya kuitika munhandare dzinovakwa pamba.
6063- Kazhinji inonzi "chivakwa chiumbwa," 6063 aruminiyamu inozivikanwa nekupa mienzaniso yekupedzisa hunhu, uye kazhinji ndiyo inonyanya kubatsira chiwanikwa kune anodizing kunyorera.
7050- Sarudzo yepamusoro yezvishandiso zveaerospace, alloy 7050 inoratidza kurwisa kwakanyanya uye kusimba kupfuura iyo 7075. Nekuti inochengetedza masimba ayo esimba muzvikamu zvakakura, 7050 aluminium inokwanisa kuchengetedza kuramba kutsemuka uye ngura.
7068- 7068 aluminium alloy ndiyo yakasimba mhando yealloy parizvino inowanikwa mumusika wekutengesa. Yakareruka ine yakanakisa ngura kuramba, iyo 7068 ndiyo imwe yeakanyanya kuomarara alloys parizvino anowanikwa.
7075- Zinc ndiyo yakakosha yekuisa zvinhu mu7075 aluminium. Simba rayo rakafanana neiya yemhando zhinji dzesimbi, uye ine kugona kwakanaka uye kuneta simba zvivakwa. Pakutanga yakashandiswa muMitsubishi A6M Zero ndege dzehondo munguva yeHondo Yenyika II, uye ichiri kushandiswa mukubhururuka nanhasi.
Aluminium Sheet 1mm , aluminum Plate, 7000 Series Aluminium , Aluminum Marine Plate , 6mm aluminum Sheet , gobvu Aluminum Plate ,